Momba anay - Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.
Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2005, manana orinasa matihanina efatra ho an'ny milina fivarotam-panafody, milina fantsom-panangonana ra, fitaovana fitsaboana rano ary fonosana mandeha ho azy & rafitra logistika manan-tsaina.
Manome vahaolana injeniera mitambatra ho an'ny ozinina mpamokatra fanafody eran'izao tontolo izao sy ozinina ara-pitsaboana izahay amin'ny fanajana ny EU GMP / US FDA GMP, WHO GMP, PIC / S GMP fitsipika sns Ny orinasanay dia miara-miasa akaiky amin'ireo andrim-pampianarana siantifika fanta-daza sy orinasa mpamorona indostrian'ny pharmaceutika hanomezana ny famolavolana tetikasa mety, ny fitaovana avo lenta ary ny serivisy namboarina ho an'ny ozinina isan-karazany / fanafody avy amin'ny firenena samihafa.
Ny vahaolana enti-miasa ao amin'ny IVEN ho an'ny ozinina ara-panafody sy ara-pahasalamana dia ahitana ny efitrano madio, ny rafitra fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso, ny rafitra fitsaboana rano amin'ny fanafody, ny fanomanana sy ny fampitana ny rafitra, ny famenoana sy ny famonosana, ny rafitra logistik manan-tsaina, ny rafitra fanaraha-maso kalitao, ny laboratoara afovoany sns. . Mifantoka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa manokana ny IVEN, manamboatra vahaolana momba ny injeniera amin'ny fomba feno ho an'ny mpampiasa:
Nanondrana fitaovana an-jatony tany amin'ny firenena mihoatra ny 40 izahay, ary nanolotra tetikasa turnkey fanafody mihoatra ny folo koa ary tetikasam-pandraharahana turnkey ara-pitsaboana maro. Miaraka amin'ny ezaka lehibe lalandava, nahazo ny hevitr'ireo mpanjifanay izahay ary nametraka tsikelikely ny laza tsara eo amin'ny tsena Iraisam-pirenena.
Miorina amin'ny filan'ny mpampiasa eran'izao tontolo izao, ny IVEN dia manohy manao fikarohana lalina sy fandalinana lalina momba ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanafody sy ny fanafody, jereo tsara ny famokarana azo antoka ny fanafody sy ny vokatra ara-pitsaboana, araho ny fanatsarana farany ny milina sy ny tetikasanay kalitao. Hiara-hiasa am-pahatsorana amin'ny orinasa pharmaceutika sy fitsaboana avy manerantany isika, hiara-hitombo ary hanao ezaka tsy manam-paharoa ho an'ny fahasalaman'ny olombelona.
* Famolavolana ny famokarana
* Famolavolana hevitra sy famolavolana antsipiriany momba ny fananganana
Manana ireto olana manaraka ireto ve ianao？
• Tsy misongadina ny zava-nisongadina tamin'ny tolo-kevitra famolavolana, tsy mitombina ny firafitra.
• Ny lamina lalindalina kokoa dia tsy namboarina, sarotra ny fampiharana.
• Tsy voafehy ny fandrosoan'ny programa famolavolana, tsy misy farany ny fandaharam-potoana fananganana.
• Tsy fantatra ny kalitaon'ny fitaovana raha tsy tsy mandeha.
• Sarotra ny manombatombana ny vidiny mandra-pahaverezana vola.
• Mandany fotoana be dia be amin'ireo mpamatsy mpitsidika, mampita ny tolo-kevitra momba ny volavola sy ny fitantanana ny fanamboarana, mampitaha hatrany hatrany.
Iven dia manome vahaolana injeniera mitambatra ho an'ny ozinina fanafody sy fitsaboana eran-tany dia ahitana ny efitrano madio, ny rafitra fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso, ny rafitra fitsaboana rano amin'ny fanafody, ny fanomanana sy ny fampitana ny rafitra, ny famenoana sy ny famonosana, ny rafitra lozisialy mandeha ho azy, ny rafitra fanaraha-maso kalitao ary ny laboratoara afovoany ary sns. Araka ny fepetra takian'ny indostrian'ny fanafody amin'ny firenena samy hafa sy ny fangatahan'ny mpanjifa tsirairay, IVEN dia mandanjalanja tsara ny vahaolana momba ny injeniera amin'ny tetik'asa turnkey ary manampy ny mpanjifanay hahazo ny laza sy ny toerana ambony ao amin'ny indostrian'ny pharmaceutika ao an-trano.
Ny fahaizantsika R&D an'ny milina fanafody ho an'ny vokatra vahaolana andiany IV dia eo amin'ny sehatra avo lenta eo amin'ny sehatra anatiny sy mandroso eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nangataka patanty teknika maherin'ny 60 izy, afaka manome antontan-taratasy fankatoavana feno ho an'ny fankatoavana ny vokatra ho an'ny mpanjifa sy ny mari-pankasitrahana GMP. Ny orinasanay dia nivarotra tsipika famokarana vahaolana malefaka IV an-jatony hatramin'ny faran'ny taona 2014, mitentina 50% ny anjaran'ny tsena; tavoahangy fitaratra tavoahangy vera IV dia mitentina 70% mahery ny tsena any Chine. Ny tsipika famokarana vahaolana tavoahangy plastika IV koa dia amidy amin'i Russia, Azia afovoany ary Azia atsimo atsinanana sns. Ny orinasanay dia nanorina fifandraisana fiaraha-miasa tsara amin'ny orinasa mpamokatra vahaolana mihoatra ny 300 any Shina, ary nahazo laza tsara tany Rosia, Ozbekistan, Pakistan, Negeria ary firenena 30 hafa. Nanjary marika malaza sinoa izahay rehefa mividy ny mpamokatra vahaolana IV maneran-tany .Ny ozinina fivarotam-panafody dia iray amin'ireo mpikambana manan-danja ao amin'ny Fikambanan'ny Fitaovam-panafody China, Komity Teknika Nasionaly momba ny fanamboarana fanafody ho an'ny fanafody, ary ny mpanamboatra ny milina famokarana fanafody any Sina. Mifehy fatratra ny kalitaon'ny milina izahay, miorina amin'ny ISO9001: 2008, manaraka ny fenitra cGMP, GMP eropeana, US FDA GMP ary WHO GMP sns.
Namolavola andiana fitaovana izahay mba hihaona amin'ny takiana namboarina, toy ny tsipika malefaka tsy vita amin'ny kitapo tsy mihosin-dra / tavoahangy / fitaratra tavoahangy IV, tsipika famokarana otrikaina / tavoahangy fanodinam-baravarankely, famonoana ranon-tava fanasana – famenoana- famehezana famokarana, vahaolana dialyzy famenoana famehezana-famehezana tsipika, zaridaina prefilled famenoana famehezana-famehezana tsipika sns.
Fitaovana fitsaboana rano:
Izy io dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny R&D sy fananganana RO unit ho an'ny rano voadio, rafitra fanadiovan-drano misy vokadroa ho an'ny rano ho an'ny tsindrona, mpamokatra etona voadio, ny rafitra fanomanana vahaolana, karazana rano sy tanky fitahirizana vahaolana ary rafitra fizarana. .
Manome endrika sy fanamboarana fitaovana avo lenta mifanaraka amin'ny GMP, USP, FDA GMP, EU GMP sns izahay.
Fambolena sy fonosam-baravarankely sy trano fanatobiana fiara:
Amin'ny maha-mpanamboatra mpitarika ho an'ny rafitra fitahirizam-pahefana fidirana an-tsokosoko sy mandeha ho azy, mifantoka amin'ny famonosana fiara sy ny rafitra fitahirizana fiara R&D, famolavolana, famokarana, injeniera ary fiofanana izahay.
Omeo ny mpanjifa ny rafitra fampitambarana iray manontolo avy amin'ny injenieran'ny Auto Warehouse WMS & WCS miaraka amina kalitao avo sy serivisy tena tsara, toy ny milina fanamboarana baoritra robotic, milina famelomana carton automatique feno, rafitra logistika automatique ary rafitra fitahirizam-bokatra telo-habe sns.
Miaraka amin'ny vahaolana mahomby indrindra, ny tetikasanay sy ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny pharmaceutika, sakafo, indostrian'ny elektronika ary indostrian'ny lozisialy sns.
Zavamaniry milina fantsom-bokatra miangona ra:
Nifantoka tamin'ny fitaovana famokarana fantsom-bokatra fanangonana ra avo lenta, mahomby, azo ampiharina ary maharitra izahay ary ny rafitra mandeha ho azy mifandraika. Noraisinay ny teknolojia famokarana fantsom-bokatra mandroso mandroso be indrindra tato anatin'ny 20 taona, ary namolavola andiany maromaro an'ny Vacuum Blood Collection Tube Production Lines izahay, izay nampiroborobo ny indostrian'ny fanangonana rà banga amin'ny ambaratonga avo manerantany.
Miezaka mafy izahay amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fanavaozana ara-teknika, nahavita patanty mihoatra ny 20 izahay ho an'ireo fitaovana famokarana fantsom-bokatra ra. Manatsara hatrany ny haavo teknikan'ny fitaovana izahay ary lasa mpitarika sy mpamorona ny indostrian'ny fanamboarana fantson-drà China.
Hatramin'izao, izahay dia efa nanome andiana fitaovana an-jatony sy fitaovana fitsaboana ho an'ny firenena maherin'ny 40. Mandritra izany fotoana izany dia nanampy ny mpanjifanay izahay hanangana ny tobim-panafody sy ny tobim-pitsaboana misy tetik'asa turnkey any Russia, Uzbekistan, Tajikistan, Indonesia, Thailand, Saudi, Iraq, Nigeria, Uganda sns. Ireo tetikasa rehetra ireo dia nahazo ny hevitry ny mpanjifanay sy ny governemanta.
Any amin'ny firenena dimy any Azia afovoany, ny ankamaroan'ny vokatra fanafody dia ampidirina avy any ivelany, tsy lazaina intsony ny fampidirana tsindrona. Rehefa avy niasa mafy an-taonany maro izahay dia efa nanampy azy ireo hiala tsirairay tamin'ny olana. Tany Kazakhstan, nanangana orinasa mpamokatra fanafody lehibe fampidirana zava-mahadomelina izahay, izay misy tsipika famokarana Soft Bag IV-Solution roa ary tsipika famokarana tsindrona ampoule efatra.
Tany Ozbekistan, nanamboatra orinasa mpamokatra fanafody tavoahangy PP tavoahangy IV izahay, izay afaka mamokatra tavoahangy 18 tapitrisa isan-taona. Ny orinasa dia tsy hoe mitondra tombony ara-toekarena be fotsiny fa manome tombony azo tsapain-tanana amin'ny olona eo an-toerana amin'ny fitsaboana fanafody.
Any Russia, na dia nanomboka teo aloha aza ny indostrian'ny pharmaceutika, dia mbola ntaolo ny fitaovana sy ny teknolojia. Taorian'ny fitsidihana marobe an'ireo fitaovana eoropeanina sy fampitahana ireo mpamatsy sinoa samihafa, ny mpamokatra fanafody famokarana fanafody tsindrona lehibe indrindra dia nisafidy antsika hanao ny boaty PP IV-Solution Project amin'ny farany, izay afaka mamokatra tavoahangy PP 72 tapitrisa isan-taona.
Mila ahiahy bebe kokoa i Afrika miaraka amin'ny isan'ny mponina marobe, izay mijanona ho malemy hatrany ny sehatry ny indostrian'ny fanafody. Amin'izao fotoana izao dia manangana orinasa malemy kitapo IV-Solution any Nizeria izahay, izay afaka mamokatra kitapo malefaka 20 tapitrisa isan-taona. Hanohy hanangana orinasa mpamokatra fanafody avo lenta kokoa eto Afrika izahay, ary irinay ny hahazoan'ny vahoaka eto Afrika tombony azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo vokatra azo antoka amin'ny famokarana trano.
Ho an'ny Afovoany Atsinanana, ny indostrian'ny pharmaceutika dia eo am-panombohana fotsiny, saingy niresaka momba ny USA FDA izy ireo miaraka amin'ny hevitra mandroso sy fenitra avo lenta indrindra hanaraha-maso ny kalitaon'ny fanafody sy ny fivarotam-panafody. Ny iray amin'ireo mpanjifanay avy any Arabia Saodita dia namoaka baiko taminay hanatanteraka ny Tetikasa Soft Bag IV-Solution Turnkey ho azy ireo, izay afaka mamokatra kitapo malefaka maherin'ny 22 tapitrisa isan-taona.
Any amin'ny firenena aziatika hafa dia manana fototra iorenan'ny tobim-panafody, saingy mbola tsy mora ho azy ireo ny manangana orinasa IV-Solution avo lenta. Ny iray amin'ireo mpanjifanay Indoneziana koa, taorian'ny fifidianana voafantina, dia nifidy anay, izay manodina hery matanjaka matanjaka indrindra, hananganana ivon-toeram-panafody IV-Solution avo lenta ao amin'ny fireneny. Vitanay ny tetikasan'izy ireo turnkey dingana 1 miaraka amin'ny tavoahangy / ora 8000 izay mandeha tsara. Ary ny dingana 2 misy tavoahangy / ora 12000 dia hanomboka ny fametrahana izahay amin'ny faran'ny 2018.
• Amin'ny maha ekipa matihanina manana traikefa mihoatra ny 10 taona sy nanangona loharanom-pahalalana amin'ny sehatry ny fanafody, ny ankamaroan'ny fividianana vokatra dia kalitao tsara, vidiny mifaninana, mahomby ary mahomby.
• Miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso matihanina sy ny fiantohana kalitao, ny volavolainay sy ny fanamboaranay dia nanaiky ny fenitra momba ny kalitaon'ny FAD, GMP, ISO9001 ary 14000, maharitra maharitra ny fitaovana ary matetika afaka mampiasa mihoatra ny 15 taona. (Vokatra vy tsy misy fangarony hita mihoatra ny 20 taona )
• Ny ekipa mpamolavola tarihinay manam-pahaizana zokiolona maro amin'ny sehatry ny pharmaceutika manana fahaizana teknika miavaka, mahay manalalina, manamafy antsipiriany, manome antoka feno ny fampiharana mahomby ny tetikasa.
• Miaraka amin'ny fikajiana am-pitandremana, ny drafitra mandanjalanja ary ny fananganana rafitra manokana momba ny kaonty, ny fitantanana ny ambaratonga ary ny fanatsarana ny vidin'ny asa an-trano, amin'izay dia ahazoana tombony tsara ireo orinasa.
• Miaraka amin'ny ekipa serivisy matihanina manohana an-tserasera sy an-tserasera amin'ny fiteny maro, toy ny: amin'ny teny anglisy, rosiana, espaniola, frantsay, ect, dia miantoka ny serivisy avo lenta sy mahomby.
• 10 taona mahery ny traikefa amin'ny tetik'asa turnkey eo amin'ny sehatry ny pharmaceutika manana fahaizana teknika matanjaka amin'ny fametrahana sy ny fananganana, ireo tetikasa dia nanaiky ny FDA, GMP ary ny Vondrona eropeana ary ny fanamarinana hafa.
Fampisehoana tranga momba ny tetikasa
Fanoloran-tena amin'ny fanompoana
I Fanohanana ara-teknika mialoha ny varotra
1. Mandraisa anjara amin'ny asa fanomanana ny tetik'asa ary omeo torohevitra momba ny torohevitra azo raisina rehefa manomboka manatanteraka ny drafitry ny tetikasa sy ny karazana karazana fitaovana ny mpividy.
2. Mandefasa injeniera teknika mifandraika amin'izany sy mpiasa momba ny varotra mba hanao fifandraisana lalina amin'ireo zavatra ara-teknikan'ny mpividy ary hanome ny vahaolana fifantenana karazana fitaovana voalohany.
3. Manome ny fizotran'ny fizotran'ny fizotr'asa, data sy data layout ary fampitaovana ireo fitaovana mifandraika amin'izany amin'ny mpividy ho an'ny famolavolana ny tranoben'ny orinasa.
4. Manomeza ohatra momba ny injeniera ho an'ny mpividy mandritra ny fisafidianana sy ny famolavolana karazana. Omeo miaraka miaraka ny ohatra mifandraika amin'ny ohatra injeniera ho an'ny fifanakalozana teknika.
5. Diniho ny sehatry ny famokarana sy ny fikorianan'ny orinasa. Omeo antontan-taratasy mifandraika amin'ny rafitra fitantanana lojika sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
II Tetikasa fitantanana amidy
1. Mikasika ny tetikasa misy sonia ny fifanarahana, ny orinasa dia manatanteraka ny fitantanana ny tetikasa mandrakotra ny fizotran'ny asa rehetra manomboka amin'ny fanaovan-tsonia fifanarahana ka hatramin'ny fizahana farany sy fanekena ilay tetikasa. Ireto misy dingana manaraka: ireto ny sonia fifanarahana, ny famaritana ny volavolan-drafitra, ny famokarana sy ny fanodinana, ny fanangonana kely sy ny fanesorana ny debugging, ny fanaraha-maso, ny fandefasana fitaovana, ny famafana ny terminal, ny fizahana ary ny fanekena.
2. Hanendry injeniera manana traikefa betsaka amin'ny fitantanana tetikasa ho toy ny olona tompon'andraikitra ny orinasa, izay handray andraikitra feno amin'ny fitantanana ny tetikasa sy ny fifandraisana. Ny mpividy dia tokony hanamafy ny fonosana fonosana ary hamela santionany. Ny mpividy dia tokony hanome ny fitaovana ho an'ny pilot pilot mandritra ny fivoriambe ary ny debugging ho an'ny mpamatsy maimaim-poana.
3. Ny fanamarinana mialoha sy ny fanekena ny fitaovana dia azo tanterahina ao amin'ny orinasa mpamatsy na any amin'ny mpividy. Raha ny fanamarinana sy ny fanekena dia tanterahina ao amin'ny ozin'ilay mpamatsy, ny mpividy dia tokony handefa olona any amin'ny ozin'ilay mpamatsy mba hijerena sy ekena ao anatin'ny 7 andro fiasana aorian'ny nahazoany fampandrenesana momba ny famokarana fitaovana vita tamin'ny mpamatsy. Raha ny fanaraha-maso sy ny fanekena dia tanterahina ao amin'ny ozin'ilay mpividy, ny fitaovana dia tokony hofongorana sy hasiana fisavana entana na avy amin'ny mpamatsy na ny mpividy ao anatin'ny 2 andro fiasana aorian'ny fahatongavan'ireo fitaovana. Tokony ho vita ihany koa ny tatitra momba ny fizahana sy fanekena.
4. Ny tetika fametrahana fitaovana dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fifanarahan'ny roa tonta. Ny mpiasan'ny debugging dia hitarika ny fametrahana araka ny fifanarahana ary hanao fiofanana an-tsaha ho an'ny mpiasa miasa sy fikojakojana ny mpampiasa.
5. Raha toa ka misy ny famatsian-drano, ny herinaratra, ny entona ary ny fitaovana debugging, dia afaka mampandre ny mpividy amin'ny endrika an-tsoratra ny mpamatsy handefa mpiasa ho an'ny fanadiovana fitaovana. Ny fandaniana amin'ny rano, herinaratra, gazy ary fitaovana fanaovana debugging dia tokony haloan'ny mpividy.
6. Ny debugging dia tanterahina amin'ny dingana roa. Napetraka ny fitaovana ary apetraka amin'ny dingana voalohany ny tsipika. Amin'ny dingana faharoa, ny fihazakazahana sy ny fihodinan'ny mpanamory dia tanterahina amin'ny fepetra maha voadio ny mari-panafanan'ny mpampiasa ary misy ny rano, herinaratra, gazy ary fitaovana debugging.
7. Mikasika ny fanamarinana farany sy ny fanekena, ny fitsapana farany dia tanterahina araka ny fifanarahana sy ny boky torolàlana momba ny fitaovana eo imason'ny mpiasan'ny mpamatsy na ny mpividy tompon'andraikitra. Ny tatitra farany sy ny fanekena farany dia feno rehefa vita ny fitsapana farany.
III Taratasy teknika omena
I) Data momba ny mari-pahaizana fametrahana (IQ)
1. Taratasy fanamarinana kalitao, boky fampianarana, lisitry ny fonosana
2. Lisitry ny fandefasana, lisitry ny ampahany mitafy, fampandrenesana momba ny debugging
3. Sary fametrahana (ao anatin'izany ny kisarisary momba ny fitaovana, ny sarin'ny toerana misy ny fantsom-pifandraisana, ny sary misy ny toerana misy ny kisary, ny sary an-tsarimihetsika elektrika, ny sarin'ny fiara mekanika, ny boky fampianarana ho an'ny fametrahana sy ny fananganana)
4. Boky fiasan-dàlana ho an'ny ampahany lehibe novidiana
II) Data momba ny fahaiza-manao (PQ)
1. Tatitra fanaraha-maso ny ozinina momba ny masontsivana fampisehoana
2. Fanamarinana fanekena ho an'ny fitaovana
3. Taratasy fanamarihana ara-pitsikilon'ny milina lehibe
4. Ny fenitra ankehitriny momba ny fenitry ny fanekena ny vokatra
III) Data momba ny mari-pahaizana momba ny asa (OQ)
1. Fomba fanandramana momba ny masontsivana teknika fampitaovana sy ny index index
2. Fomba fiasa mahazatra, fomba famafana mahazatra
3. Fomba fikojakojana sy fanamboarana
4. Fitsipika momba ny tsy fahampian'ny fitaovana
5. Firaketana ny mari-pahaizana fametrahana
6. firaketana ny mari-pahaizana momba ny fahombiazana
7. Pilot mihazona mari-pahaizana mendrika
IV) Fanamarinana ny fahombiazan'ny fitaovana
1. Fanamarinana fototra ampiasaina (jereo ny habetsahan'ny entana sy ny fahazavana)
2. Zahao ny fampifanarahana ny firafitra sy ny famoronana
3. Fitsapana mandeha ho azy ho an'ny Requemment fanaraha-maso mandeha ho azy
4. Manome vahaolana ahafahan'ny fitaovana feno hamenoana ny fanamarinana GMP
IV Serivisy aorian'ny fivarotana
1. Mametraha rakitra ho an'ny mpanjifa, tazomy ny rojom-bary tsy misy fanelingelenana amin'ny kojakoja fanampiny ary manome torohevitra ho an'ny fanavaozana sy fanoloana teknika an'ny mpanjifa.
2. Atsangano ny rafitra fanaraha-maso. Tsidiho matetika ny mpanjifa rehefa vita ny fametrahana ny fitaovana sy ny debugging mba hanomezana fampahalalana momba ny fampiasana ara-potoana mba hiantohana ny feo, milamina sy azo antoka ny fiasan'ireo fitaovana ireo ary manaisotra ny ahiahin'ireo mpanjifa.
3. Manaova valiny ao anatin'ny 2 ora aorian'ny nahazoana ny fampandrenesana momba ny tsy fahombiazan'ny mpividy na ny fepetra takiana amin'ny serivisy. Alamino ny mpiasa hikarakara azy ireo hahatratra ny tranokala ao anatin'ny 24 ora, ary 48 ora farafaharatsiny.
4. vanim-potoana fiantohana kalitao: 1 taona aorian'ny fanekena ny fitaovana. "Fiantohana telo" notanterahina nandritra ny vanim-potoana fiantohana kalitao dia ny: fiantohana ny fanamboarana (ho an'ny milina feno), antoka ny fanoloana (ho an'ny fitafiana faritra ankoatry ny fahasimbana nataon'olombelona), ary fiantohana famerenam-bola (ho an'ireo faritra tsy voatery).
5. Mametraha rafitra fitarainana momba ny serivisy. Io no tanjonay faratampony hanompoana bebe kokoa ny mpanjifantsika sy hanaiky ny fanaraha-mason'ny mpanjifanay. Tokony hamarana amin'ny fomba hentitra ny fisehoan-javatra tadiavin'ny mpiasan-karama izahay mandritra ny fametrahana ny fitaovana, ny debugging ary ny serivisy teknika.
V Fandaharam-panofanana momba ny fiasa sy ny fikojakojana
1. Ny fitsipika ankapobeny amin'ny fampiofanana dia ny "habetsahan'ny avo, avo lenta, haingam-pandeha ary fihenam-bidy". Ny programa fanofanana dia tokony hanompo ny famokarana.
2. Fianarana: Mazava ho azy momba ny teôria sy taranja azo ampiharina. Ny lalam-pampianarana teôria dia miompana indrindra amin'ny fotokevitra miasa, ny firafitra, ny toetran'ny fampisehoana, ny laharam-pahamehana, ny fitandremana sns ... Ny fomba fampianarana ho an'ny mpianatra mianatra ho an'ny fampianarana azo antoka dia ahafahan'ny mpiofana mahafehy haingana ny fandidiana, ny fikojakojana isan'andro, ny fanafoanana ary ny famahana ny olana. fitaovana sy ny fanoloana ary fanitsiana ireo faritra voatondro.
3. Mpampianatra: famolavolana lehibe ny vokatra sy ny teknisiana efa za-draharaha
4. mpiofana: mpiasa miasa, mpiasa mpikojakoja ary tompon'andraikitra mpitantana mifandraika amin'ny mpividy.
5. Fomba fampiofanana: Ny programa fiofanana dia tanterahina ao amin'ny tranokalan'ny fanamboarana fitaovana voalohany, ary ny programa fanofanana dia tanterahina amin'ny toerana famokarana an'ny mpampiasa fanindroany.
6. Fotoam-piofanana: Miankina amin'ny toe-javatra azo ampiharina amin'ny fitaovana sy ny mpiofana
7. Saran'ny fiofanana: Manome tahiry fiofanana maimaimpoana ary mandray maimaimpoana ireo mpiofana ary tsy manome sarany fiofanana.